Weerarkii iskuulka Nigeria: Dableydii afduubatay carruurta oo 'la hareereeyay' - Politicians in the News
Weerarkii iskuulka Nigeria: Dableydii afduubatay carruurta oo 'la hareereeyay'
Waaliddiinta ayaa iyagoo walaacsan ku sugan iskuulka si ay war uga helaan carruurtooda.
Ciidamada dowladda Nigeria ayaa hareeyay deegaan ay rag hubeysan oo la rumeysan yahay inay carruur iskuulley ah ku hayaan oo ku yaalla waqooyi-galbeed gobolka Katsina.
Ma cadda tirada ardayda la afduubtay, iyo inta carartay intii uu weerarka socday welina lama helin.
Qiyaastii 800 oo arday ah ayaa ka diwaan gashanaa iskuulka oo ay wiilal oo keliya dhigtaan.
Kuwa weerarka soo qaaday ayaa loo maleynayaa inay doonayeen madax furasho, sida uu sheegay kaaliyaha Madaxweyne Muhammadu Buhari.
Dowladda ayaa weerarka la xiriirsay koox burcad ah, waa eray jilicsan oo loo adeegsado burcadda ka howlgasha deegaanka.
Amnesty International ayaa sheegtay in in ka badan 1,100 qof ay burcadda ku dileen waqooyiga Nigeria lixdii bilood ee ugu horreeyay sanadka, iyadoo ay dowladda ku guul darreysatay inay caddaaladda marsiiso kuwa weerarka sooq aaday.
Weriyaha BBC-da ee Nigeria Mayeni Jones ayaa sheegtay inuu jiro walaac xooggan oo laga qabo ammaanka Nigeria.
Waqooyi-galbeed waxaa sameeyay afduubyada lagu doonayo madax furashada, waqooyi-bari waxaa ragaadiyay Islaamiyiinta, koofurtana waxaa saameeyay weerarrada ay koox dalbanaya saami qeybsi ku qaadaan xarumaha shidaalka, ayay tiri.
Waaliddiinta ayaa isugu yimid iskuulka oo ku yaalla deegaanka Kankara, iyagoo maamulka ka codsanaya inay soo helaan carruurtooda, sida ay shaacisay wakaaladda wararka Reuters.
Abubakar Lawal ayaa laga soo xigtay isaga oo leh in labo ka mid ah saddexdiisa wiil ee dhiganayay iskuulka oo loo yaqaanno Dugsiga Sare ee Sayniska ee Dowladda ay maqan yihiin.
In ka badan 300 oo carruur ah ayaa la sheegay in la la` yahay, sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan maamulka gobolka.
Osama Aminu Maale, oo ah arday ka baxsaday afduubayaasa ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in boqollaal arday ah lala tagay.
“Kaddib markii ay nala tageen waxaan ku istaagnay gudaha baska, iyagoo ardayda waaweyn u sheegay inay madax tiris sameeyaan. Waxaan xisaabinnay 520,” ayuu yiri ardaygan 18 jirka ah.
Ardayda ayaa kaddib loo kala qeybiyay kooxo kahor inta Mr Maale iyo afar kale aysan baxsan.
“Mid ka mid ah raggii hubeysnaa ayaa dhowr jeer i garaacay kaddib markii aan la joogi waayay kooxda kale sababo la xiriira caafimaadkeyga kaddibna wuxuu ii oggolaaday inaan gadaal maro, isaga oo fursad ii siiyay inaan baxsado,” ayuu yiri.
‘Buracadda waa laga takhalusi doonaa’
Sabtidii, milatariga ayaa sheegay inay heleen halka ay ragga hubeysan kaga dhuumanayaan keynta isla markaana ay rasaas is dhaafsadeen.
Wareysi ay la yeelatay BBC-da, Garba Shehu, oo ah afhayeenka madaxweynaha, wuxuu sheegay in ciidamo badan lagu daad gureeyay goobta si ay u badbaadiyaan carruurta la afduubtay.
“Taliyeyaasha milatariga ee deegaanka ku sugan way ka war hayaan halka ay rumeysan yihiin inay joogaan burcadda, iyo carruurta ay hayaan. Way hareereeyeen dhammaan deegaankaas,” ayuu intaas ku daray.
Ammaanka iskuulka ayaa la sugay kaddib weerarka
Madaxweyne Buhari wuxuu ka soo jeedaa gobolkaas, wuxuuna haatan halkaas u joogaa booqasho khaas ah.
Saacad saacad ayaa loogu sheegaa dadaallada lagu badbaadinayo carruurta, ayuu yiri Mr Shehu.
“Kooxaha dembiilayaasha, burcadda, waa la baabi`in doonaa. Waa la cirrib tiri doonaa,” ayuu intaas ku daray.
Carruurta ayaa rumeysan in 10 ka mid ah ardayda fasalkooda ay burcadda la tageen, balse tan weli xaqiijin ayay u baahan tahay, ayuu yiri Mr Shehu.
Maamulka iskuulka ayaa kala hadlay waaliddiinta inay la socodsiiyaan inta arday ee soo laabatay iyo inta loo maleynayo inay ku kala firirsan yihiin deegaanka ballaaran kaddib markii ay ka qaxeen weerarka.
Xigashada Sawirka, Gail Kankara
Iskuulka wuxuu ku yaallaa miyiga waqooyi-galbeed Nigeria
Dadka ku nool agagaarka iskuulka ayaa BBC-da u sheegay inay maqleen rasaas abbaarihii 23:00 (22:00 GMT) Jimcihii, isla markaana uu weerarku socday wax ka badan hal saac.
Kooxda ammaanka iskuulka ayaa ku guuleystay inay iska caabbiyaan qaar ka mid ah kuwa weerarka soo qaaday kahor inta uusan booliiska iman goobta.
Booliiska ayaa sheegay in tii rasaasta la is weydaarsanayay, ay qaar ka mid ah raggii hubeysnaa dib u gurteen. Ardayda ayaa awooday inay derbiyada iskuulka ka boodaan oo ay baxsadaan.
Dhowr dadka deegaanka ah ayaa kala qeyb qaatay booliiska baadigoobka ardayda, halka waaliddiin badanna ay sheegeen inay caruurta ka baxsadeen iskuulka.
“Iskuulku wuu maran yahay, dhammaan carruurta waa laga bixiyay,” ayay goobjooge, Nura Abdullahi, u sheegtay AFP.
Barasaabka Katsina, Aminu Bello Massari, ayaa amray in la xiro dhammaan iskuullada xannaanada ee ku yaalla gobolka.
wpaadmin2020-12-14T10:17:15-06:00December 14th, 2020|Categories: Nigeria|Tags: Muhammadu Buhari|
United Arab Emirates Germany Israel Argentina Egypt Mexico Tanzania Brazil Russia India Armenia Ethiopia Ireland Uganda Canada Palestine South Africa France Kenya China United Kingdom Iran United States Nigeria Turkey